रातोकार्ड पाएपछि रोनाल्डो रुँदैरुँदै बाहिरिए, १५४ खेलमा पहिलो रेडकार्ड ! - Everest Dainik - News from Nepal
रातोकार्ड पाएपछि रोनाल्डो रुँदैरुँदै बाहिरिए, १५४ खेलमा पहिलो रेडकार्ड !
असोज ४ । च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा विभिन्न इतिहास आफ्नो नाममा लेखाएका पोर्चुगिज क्रिष्टियानो रोनाल्डोका लागि स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडबाट इटालियन क्लब युभेन्सटको यात्रा त्यति सहज देखिएको छैन । च्याम्पियन्स लिगमा पछिल्ला ६ सिजन सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै आएका र सर्वकालीन सर्वाधिक गोलकर्ता रोनाल्डोले नयाँ क्लब युभेन्टसबाट च्याम्पियन्स लिगको डेब्यु सायद जीवनभर भुल्ने छैनन्।
रोनाल्डोले खेलको २९ औँ मिनेटमा सीधै रातो कार्ड पाए र मैदान छोड्न बाध्य भए । रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगमा कुल १५४ खेल खेलेका छन् र यो पहिलो पटक हो उनी रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस विवाह नै नगरी यसरी चार सन्तानको पिता बने रोनाल्डो ?
युभेन्टसबाट सिरी ए का सुरुका तीन खेलमा गोल गर्न नसकेका रोनाल्डोले चौथो खेलमा दुई गोल गरे, त्यो पनि च्याम्पियन्स लिगको यो खेल भन्दा केही दिनअघिको खेलमा । यसले रोनाल्डो अब लयमा फर्किएको देखियो । तर बुधबारको रात रोनाल्डोका लागि खेल जीवनकै खराब मध्ये एक बनेर आयो । उनले आँसु रोक्न सकेनन् ।
सन् २०१६ को युरोकप फाइनलको क्रममा चोटका कारण खेल्नै नसकेर मैदानबाट बाहिरिने क्रममा रोनाल्डो यसैगरी रोएका थिए । अहिले फेरि युभेन्टसबाट च्याम्पियन्स लिगको डेब्युमा रोए ।
रोनाल्डोले खेलमा पहिलो हाफको मध्य तिर भ्यालेन्सियाका डिफेन्डर जिएसन मुरिलोको कपाल तानेको देखियो । बल नियन्त्रणमा लिने क्रममा थिए दुवै खेलाडी । त्यहि क्रममा भ्यालेन्सियाका डिफेन्डर मुरिलो लडे ।
रोनाल्डोले उनलाई सजिलो गराउन टाउकोमा मुसारेका थिए । तर मुरिलोलाई त्यो मन परेन छ, उनी उठेर जंगिए । रोनाल्डो हात उठाउँदै पर भए । तर रेफ्रीलाई के लाग्यो, आफ्ना सहायकसँग सल्लाह गरेर रोनाल्डोलाई सीधै रेड कार्ड देखाए । पाँच पटकका च्याम्पियन्स लिग विजेता रोनाल्डो चकित परे, उस्तै उनको टिमका खेलाडी र प्रशिक्षक पनि, अनि सायद अरु दर्शक ।
याे पनि पढ्नुस मेस्सी फिफा उत्कृष्ट खेलाडीको शीर्ष तीनबाट आउट, सालहको इन्ट्री
११२ मिलियनमा युभेन्टस गएका रोनाल्डोका लागि स्पेन यात्रा फाप भएन । उनले खेलमा प्रभाव कायम गरेका थिए । गोल गर्नका लागि प्रयासहरु पनि हुँदै थियो । बल नियन्त्रणमा लिने क्रममा मुरिलो लडे, रोनाल्डोले उनलाई उठ्न संकेत गर्दै कपाल ताने या भनौँ मुसारे ।
तर मुरिलोलाई मन परेन, निकै रिसाए । रोनाल्डो निराश देखिएर फर्किए । युभेन्टस र भ्यालेन्सियाका खेलाडीहरु डि–बक्समा विवादमा उल्झिए । रेफ्री फिलिक्स ब्रिचले आफ्ना सहायकसँग सल्लाह गरेर रोनाल्डोलाई रातो कार्ड देखाए ।
च्याम्पियन्स लिगका कीर्तिमानी गोलकर्ता रोनाल्डो रेफ्रीको निर्णयमा आक्रोशित देखिए । विरोध गरे र आफ्नो निर्दोषताको प्रमाण दिन खोजे अनि अन्ततः मैदानबाट आँसु पुच्छदै बाहिरिए ।
१५४ च्याम्पियन्स लिग खेलमा रोनाल्डो पहिलो पटक बाहिरिएका हुन्, उनले अब कम्तिमा एक खेलको प्रतिबन्ध भोग्नु पर्नेछ । रोनाल्डो रुँदै बाहिरिएपछि युभेन्टस केही दबाबमा आउने ठानिएको थियो, तर १० खेलाडीमा सीमित भएको टिमले भ्यालेन्सियालाई उसकै मैदानमा २-० ले हरायो ।
घटना हेर्दा रोनाल्डोले मुरिलोलाई चोट पुर्याउने ध्येयले नभई एक साथीले अर्को साथीलाई असजिलोमा सजिलो बनाउनका लागि टाउको मुसारे जस्तो देखिन्छ ।
तर रोनाल्डोको त्यहि दाजु जस्तो व्यवहार उनकै लागि घातक बन्यो र च्याम्पियन्स लिगको इतिहासमा पहिलो रातो कार्ड पाए, त्यो पनि नयाँ क्लबबाट डेब्युको क्रममा । सायद रोनाल्डोका लागि स्पेनिस माटो फाप्ने रहेनछ अब । अनि उनको राम्रो मनमा पनि खोट देखियो । देश सञ्चारबाट